6 ka mid ah 16 xagaa oo qalalan ayaa dhacay 10-kii sano ee la soo dhaafay | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka cimiladu wuxuu kordhiyaa celceliska heerkulka meeraha, wuxuu kordhiyaa soo noqnoqoshada iyo xoojinta abaaraha sidaa darteedna, xagaaga ayaa ah kuwo aan loo adkaysan karin.
Koox juquraafi ah oo ka socda Jaamacadda Zaragoza ayaa soo gabagabeeyay 6 ka mid ah 16 xagaaga aadka u qalalan laga diiwaan geliyey waqooyi-galbeed ee Jasiiradda Iberia waxay dhacday tobankii sano ee la soo dhaafay. Maxaa dhacaya haddii tani sii socoto?
1 Xagaaga aad iyo aad u qalalan
2 Abaar badan
Xagaaga aad iyo aad u qalalan
Sidaad hubaashii horeba u soo martay, xagaaga Isbaanishku way sii qallalayaan oo ka diiran yihiin. Tani waxay keenaysaa in nidaamka deegaanka uu si daran u saameeyo iyo sidoo kale ilaha biyaha ee aagagga sidoo kale. Roob la'aanta ayaa badaleysa isku dheelitirka nidaamyada deegaanka oo gebi ahaanba ku tiirsan biyaha oo ah tiirarka aasaasiga u ah howlaha nolosha.
Jaamacadda Zaragoza waxay sameysay daraasad, iyada oo loo marayo koritaanka shucaaca ee geedaha ugu da'da weyn Isbaanishka, ay isku dayday inay dib u dhisto jawiga hore. Geedaha ugu da'da weyn ee la baaray waxay aqoonsadaan xagaaga sannadihii 2003, 2005, 2007, 2012 iyo 2013 ka mid ah kuwii ugu kululaa ee la diiwaan geliyey muddada la soo gudbiyey.
Abaarta ka jirta Spain ma ahan dhacdo ugub ah. Cimiladeenu ma haysato roob aad u tiro badan, hase yeeshe, xaddiga biyaha ee sanad walba dhaca badanaa waa joogto. Isbedelka cimilada darteed, abaartu waa dhacdo ku soo noqnoqoneysa deegaannada badda Mediterranean-ka, iyo in kasta oo waxqabadka aadanaha iyo nidaamyada dabiiciga ah laftoodu ay la jaanqaadeen xaaladdan, kororka soo noqnoqoshada, weynaanta iyo xoogooda sababo la xiriira isbeddelka cimilada ayaa si weyn u saameyn kara jiritaanka guud ahaan
Sidaa darteed, waxaa loo tixgeliyaa in macluumaadka laga helay cilmi baaristan waa muhiim in la ogaan karo saameynta abaarta mustaqbalka halkaas oo marxaladda ugu weyn ee keymaha Mediterranean ay ku xiran tahay isbeddelka cimilada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Abaaraha » 6 ka mid ah 16 xagaa oo qalalan ayaa dhacay 10-kii sano ee la soo dhaafay
New York waxay la kulmi kartaa daadadkii ugu xumaa ee taariikhdeeda haddii aysan qaadin tallaabo ay ku joojiso kuleylka adduunka